Mamorona blur amin'ny horonan-tsary miaraka amin'ny Adobe Premiere | Famoronana an-tserasera
Mamorona blur amin'ny video miaraka amin'i Adobe Premiere Izy io dia zavatra tena mora atao ary afaka manampy antsika amin'ny antsika rehetra tetikasa audiovisual. Androany, ny blur dia azo noforonina tamina fakantsary reflex fa matetika dia hahita horonantsary izay tadiavintsika isika asio blur aorian'ny nanoratanao horonantsary iray.
Ampiharo haingana sy tena matihanina ny blurs amin'ny horonan-tsarinao fanatrarana io valiny io izay tadiavinao fisaorana betsaka amin'ilay programa Premiere, programa matihanina tena intuitive. Makà fanaraha-maso bebe kokoa amin'ny fanovana horonan-tsary.
Un nanjavozavo ny zavatra nosoratany dia matetika ampiasaina ho mampifandray singa eo amin'ny fiaramanidina roa amin'ny alàlan'ny tetezamita fa azo ampiasaina ho vokany amin'ny zavatra mivainganaOhatra, raha te hisolo tena ny olona iray izay mijaly amin'ny fanina isika amin'ny horonantsarinay, dia azontsika atao ny mampiasa an'io blur io. Azo ampiasaina amin'ny a fampidirana anaty horonan-tsary na ho asongadino ny singa sasany anaty fiaramanidina. Na inona na inona tanjona dia mitovy foana ny teknika.
Ny zavatra voalohany ilaintsika mamorona ny vokatray manjavozavo dia ny manokatra ny rakitra video ao amin'ny Premiere. Raha vantany vao misokatra ny rakitra dia hafindraintsika amin'ny timeline ary hijerena ny menio ankavia ho an'ny katalaogin'ny vokar-tsarimihetsika, ao anatin'ity katalaogna ity no hahitantsika a Fizarana blurs. Ho an'ity ohatra ity dia hampiasa ny Gaussian blur.
Para apetaho Mila misintona azy io fotsiny amin'ny horonantsary misy antsika isika, avy hatrany ny horonan-tsarintsika dia efa nampihatra izany. Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia ny manome avo roa heny Click ao amin'ny horonan-tsary nampiharinay ny vokany ary safidinay ny ambony bara ny safidy mifehy ny vokany.
Rehefa tafiditra ao anatin'ny masontsivana vokarin'ny blur tsy maintsy manomboka isika mamorona keyframes ny mampihatra tsy mazava afa-tsy amin'ireo faritra manokana ireo. Raha tsy mitady blur mihoatra ny iray isika fa ny iray ankapobeny (amin'ny fiandohan'ny horonantsary mono) dia tsy mamorona keyframes fa hampiharintsika mivantana ilay blur, raha tiantsika afaka mamorona maromaro hahatratrarana vokatry ny gradient.
Raha mijery akaiky isika amin'ny menio dia afaka mahita famantaranandro iray isika, Hampiasainay ity famantaranandro ity hanombohana ny vokatray tsy mazava. Ny rafitra no mamorona keyframes mandritra ny famindrana ny fizotry Azul izay hitantsika ery ambony.
Tsindrio ny famantaranandro mba hanombohana ny vokany, aorian'ity smifidy ny faribolana kely hitantsika eo ankavanana isika. Izahay dia mamindra ny bara fandrefesana ny horonan-tsary ary mamorona andian-tsarimihetsika amin'ireo faritra mahaliana anay izahay. Ny zavatra farany ataontsika dia ny mamindra ny bara eo ambanin'ny famantaranandro mba hampihatra ny vokatsika manjavozavo amin'ny lafiny lehibe na kely ihany koa. afaka mamindra ny hevitra isika hahatratra ny vokany mitovy. Raha tiantsika afaka asio blur mampiasa endrika banga de Premiere (ellipse sy square) raha toa ka tsy mazava loatra izay tadiavintsika dia afaka misafidy amin'ny penina isika.
Mamorona blur amin'ny horonan-tsary miaraka amin'ny Adobe Premiere zavatra afaka mamonjy ny aintsika amin'ny tetikasa audiovisual marobe izy io, noho izany antony izany dia ilaina izany fantaro ireo karazana teknika ireo raha manokana momba ny fanovana horonantsary miaraka amin'ity na programa hafa izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Mamorona blur amin'ny horonan-tsary miaraka amin'ny Adobe Premiere
Ny fandaharam-pianarana Vitae an'ny mpamorona sary: ​​fanavaozana tena izy